Mareykanka oo cunaqabateymo ugu hanjabay dowladda Itoobiya haddii ay joojin wayso caqabadaha ay ku hayso shaqaalaha UN-ka.
Saturday October 02, 2021 - 13:19:32
Jawaab cellino caalami ah oo isugu jira cambaarayno iyo hanjabaado ayaa laga bixiyay tallaabadii ay dowladda Xabashida Itoobiya dalkeeda uga eriday mas'uuliyiin katirsan Q.Midoobay.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ayaa gelinkii dambe ee maalintii khamiisti soo saaray amar lagu eryayo illaa 7 kamid ah mas'uuliyiin Q.midoobay ee ku sugan magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale.
Itoobiya ayaa ku eedaysay saraakiisha UN-ka in ay qeyb ka yihiin colaadda wadanka ka jirta ayna ku dhax milyeen siyaasadda Itoobiya.
Saraakiisha la eryay waxaa kujira madaxda hay'adaha UNICEF iyo UN OCHA kuwaas oo xarumo waaweyn ku lahaa Itoobiya, afhayeen uhadlay wasaaradda arrimaha dibada xukuumadda Addis Ababa ayaa ku eedeeyay UN-ka in ay faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha wadanka ayna ka tallaabeen xadkooda.
Itoobiya ayaa amar ku bixisay in todobadan mas'uul ay dalka uga baxaan 72 saacadood gudahood, isniintii lasoo dhaafay ayay saraakiisha UN-ka ee Itoobiya ku sugan waxay sheegeen in kumanaan ruux Tigray ay ay majaaco ugu dhiman doonaan waqooyiga Itoobiya sababa laxiriira xukuumadda oo xayiraad kusoo rogtay gaadiidkii halkaas gargaarka udaabuli lahaa.
António Guterres oo ah xoghayaha guud ee Q.Midoobay ayaa tallaabadan si kulul ucambaareeyay wuxuuna ku sheegay mid halis gelin karta nolosha malaayiin ruux.
Waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya in ay ka laabato amarka ay ku eryayso mas'uuliyiintii ka shaqeynayay arrimaha gargaarka bani'aadanimada.
Dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateymo ugu goodisay xukuumadda Abiy Axmed haddii ay ka laaban weyso eryidda shaqaalaha UN-ka.
Afhayeenad uhadashay aqalka cad ayaa tallaabada Itoobiya qaadday ku sifaysay mid halis ku ah nolosha malaayiin ruux,Mareykanka ayaa ku goodiyay in uu xayiraado kusoo rogi doono saraakiisha ku lugta leh cadaadinta lagu hayo shaqaalaha UN-ka.
Antony Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Washington ayaa isna Itoobiya ugu baaqay in ay ka laabato go'aamadii ay qaadatay khamiistii lasoo dhaafay.